Vk.com - isisetshenziswa ezivamile phakathi abasebenzisi hhayi kuphela eRussia, kodwa futhi amazwe we eduze phesheya. Umsebenzi oyinhloko website - zokuxhumana, ukwesekwa ubudlelwano nabantu kude nawe. Kusayithi ungakwazi ukulalela izingoma, ubuke amavidiyo nezithombe. Ngenxa yonke indawo "VKontakte" angabhekwa ukwabelana esikhulu ifayela. Nokho, naphezu anhlobonhlobo amasevisi engase imelele yokuxhumana, ukufinyelela kubo, kuzodingeka kuphela emva ukubhalisa.
Ukuze fun, ake sithi, ilindele impendulo umyalezo, "In Touch" ungafaka imidlalo nezinhlelo zokusebenza. Imidlalo ethandwa kakhulu, njengokuthi "Merry Farmer", etholakala phezulu uhlu phezulu. By the way, imilayezo nabanye abasebenzisi, ungaba hhayi kuphela ngasese kodwa futhi odongeni okuthiwa. Konke okufakwayo kuso abazenzi ngesimo microblogging, ezinye izilungiselelo zalo kungaguqulwa ku izilungiselelo zobumfihlo.
Kuyinto edabukisayo ukuthi zonke lezi izimfanelo ezinhle hhayi ungabona okungekuhle. Futhi, njenganoma iyiphi ingosi yokuxhumana nabantu abakhona. Emva iqembu ikhasi kanye Public akuzona kuphela zinezinhloso ezinhle. Ezinye zazo ongasinikeza noma yikuphi ibhizinisi kwezohwebo noma ezingekho emthethweni, namanye amafayela wenze okuqukethwe porngraficheskogo nogaxekile. Yiqiniso, inqubo ukuhlolwa kanye kokuthola izicelo ekuphathweni isayithi, namaqembu kanye namakhasi kuwumshikashika, kodwa akwenziwa ngosuku olulodwa.
Abanye abasebenzisi ukucasula abanye ngamabomu, babukise ngabo bese uwuveza obala kwaze kwaba ukuhleka usulu. Indlela yokugwema lokhu na? Ngezinhloso enjalo, futhi uhlu black of "In Touch". Ngesicelo sakho ke ungathola ngokuphelele yimuphi umsebenzisi of yokuxhumana. Uma ufaka in the black uhlu "contact" umuntu, khona-ke:
ngeke zivela kuye eminye imilayezo;
akakwazi nganoma iyiphi indlela ukuze ubuke ikhasi lakho;
uyoba uzivikele engemihle.
Njengoba uhlu lokuvimbela "In Touch" Umuntu omubi? Kungani uye ekhasini lakho bese ukhetha ohlwini ngalokwentekako kwesokunxele "izilungiselelo zami" - uzobona ikhasi ngezinketho. Ithebhu wesine (kwekhasi) ngokuthi "Black ohlwini / yisivikelo / inyumbazane" - lincike olimini oyisebenzisayo "contact". Ngemva ngokuchofoza imenyu ithebhu lokuvinjelwe izovela. Uma une kwakungekho muntu lapho - emkhakheni ngeke sibe nalutho.
Ngesikhathi phezulu ewindini kuyothiwa elise ohlangothini kwesokudla okuyinto "Engeza ukuze bafakwe ohlwini lwezinhlangano" inkinobho asebenzayo. Faka kuwo kungenzeka izakhamuzi ngezindlela ezimbili: igama lokuqala nesibongo noma ikheli ikhasi. Uma usebenzisa igama kanye nesibongo somuntu, ngemva kokufaka lolu lwazi ku-window uzobe wethulwa bonke abantu lezi nemingcele. Uma kwenzeka ukulingana isixhumanisi page, umnikazi ithola ngokuzenzakalelayo ohlwini.
Ikhona yini enye indlela ukuletha kungaba umuntu black uhlu "In Touch"? Ngokwesibonelo, sebenzisa imenyu, esemgwaqweni ngqo ekhasini wakhe. Ukuze wenze lokhu, hamba kukhasi unentshisekelo umuntu futhi sibheke imenyu, esemgwaqweni emva uhlu okuqoshiwe umsebenzisi. Kuzoba okufakiwe eziningana, enye yazo "Engeza ohlwini Black". Kumele kuqashelwe ukuthi le nqubo kuyatholakala kulabo abangebona abangane bakho kuphela.
Susa abantu zifakwe black uhlu "In Touch", futhi akukho nobunzima. Nokho, le nqubo wenziwa kuphela kuzilungiselelo zekhasi le. Ukuze wenze lokhu, umsebenzisi ngamunye itholakala eduze "Susa ohlwini" (ngakwesokudla).
Futhi khumbula ukuthi akekho nge izenzo zabo bangakhathaleli muntu akufanele ukugxambukela ubukhona bakho ku inethiwekhi: akukho spamschiki noma abamele inethiwekhi yokumaketha noma abantu anolaka ikhono lokungacasuli.
Movie Maker - uhlelo kakhulu kunoma ngubani ofuna ukufunda indlela ukudala slide show
Rhinoplasty - Rhinoplasty kuyinto ... (Rhinoplasty): izintengo, izithombe ngaphambi nangemva, Izimo, ukuvuselelwa